Makambani eMangoda Oramba Kuti Akavimbisa Mari yeKubatsira Vagari
Kurume 07, 2014
HARARE — Makambani ari kuchera mangoda kwaChiadzwa audza kukomiti inoona nezvekupa masimba ehupfumi kuvatema kuti haana kumbovimbisa kuti achapa mamiriyoni makumi mashanu emadhora kuchirongwa chekusimudzira nharaunda iyi cheMarange Zimunya Community Share Ownership Trust sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, apo vakaparura chirongwa ichi muna 2012.
Achipa humbowo hwekuti sei asiri kubatsira chirongwa ichi nemari sezvaakavimbisa, kukomiti inoona nezvekupa masimba ehupfumi kuvatema, makambani aya ese ari mashanu ati haana kumbovimbisa kuita izvi.
Makambani aya anoti Marange Resources, Diamond Mining Corporation, Mbada Diamonds, Anjin neJinan Mining.
Makambani aya anoti chaanoziva ndechekuti akaudzwa chete kuti kambani imwe neimwe inosungirwa kupa chirongwa ichi miriyoni nemazana mashanu ezviuru zvemadhora.
Asi sachigaro wekomiti iyi, VaJustice Mayor Wadyajena, vaudza makambani aya kuti komiti yavo ine magwaro kubva kukambani ye National Indigenization and Economic Empowerment Board anoratidza kuti akavimbisa kutsigira Marange Zimunya Trust nemamiriyoni gumi emadhora kubva kukambani imwe neimwe.
Asi makambani yaya aramba izvi.
VaMark Mabhudhu veMarange Resources vaudza komiti iyi kuti kambani yavo yakazvipira kubvisa mari yekubatsira chirongwa ichi yakataurwa nehurumende uye pari zvino vakatobvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora.
Sachigaro veMbada Diamonds, VaRobert Mhlanga, vatiwo kunyange hazvo vasina kumbovimbisa kubatsira chirongwa ichi nemari sezviri kunyorwa mumapepa nhau, kambani yavo yakazvipira kubvisa mari inenge yabvumiranwa.
Vati kusvika pari zvino vakatopa chirongwa ichi mazana maviri ezviuru zvemadhora.
Mukuru wekambani yeDiamond Mining Corporation, VaRamzi Malik, vati kambani yavo inoda chose kubvisa mari yakataurwa nehurumende asi havasati vaita izvi nekuti chirongwa ichi hachina kurongeka uye panenge pane chikiribidi chiri kuitika.
Vatiwo zvinhu hazvina kurongeka munyaya dzemangoda munyika uye zvakakosha kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuti vanhu vekwaMarange vabatsirike nemari yemangoda.
Vange vakamirira Anjin, VaMunyaradzi Machacha, vatiwo kunyange hazvo kambani yavo isati yabvisa mari yakataurwa behurumende, mari iri kudiwa ishoma chose kana zvikaenzaniswa nemamiriyoni makumi manomwe emadhora ashandiswa nekambani iyi mukubatsira vanhu kubva muna 2011.
Vati kambani yavo ichabvisa mari iyi kana zvinhu zvichinge zvakanaka vachiti pari zvino basa harisi kufamba zvakanaka mukambani mavo.
Ongororo yaitwa neparamende inotevera mashoko ekuti pane vamwe vakuru vakuru muZanu PF vari kupindira pamwe nekukanganisa mumashandiro eMarange Community Share Ownership Trust.
Vamwe vanonzi vari kuita izvi ndiVaDidymus Mutasa pamwe naVaChristopher Mushowe. Studio7 haina kunzwa divi revaviri ava.
Mamwe makambani apa humbo abvuma kuti VaMushowe vakatovakumbira mari yekutsigira chirongwa ichi.
Apo zvimwe zvirongwa zvakaita seTongogara kuMidlands zvave kutoita zvirongwa zvebudiriro, Marange Zimunya haina zvayati yaita zvisinei kuti yave nemazana mana ezviuru zvemadhora.